Ducada Santa Muerte ee Jacaylka aan Suurtagal ahayn ? + Waxtar leh
Tukashada dhimashada quduuska ah jacaylka aan macquul aheyn Waad ku noolaan kartaa jaceylkaas aad u jeceshahay ama u soo qaado qofka qaaska ah ee ka guuray sabab uun ama sabab kale.
Waxaad ku kalsoonaan kartaa in Saintani ay leedahay aaladaha lagama maarmaanka u ah in ay ka adkaato waxa aan u qaadanay si qumman.
Waxay ku noolayn kartaa dareenka dhintay ama waxay ka dhigi kartaa inay ka muuqdaan qalbiga ugu qallafsan uguna qallafsan ee jira.
1 Waa maxay salaadda Santa Muerte jacaylka aan macquul ahayn?
1.1 Tukashada dhimashada quduuska ah jacaylka aan macquul aheyn
2 Tukashadani awood ma leedahay?
Waa maxay salaadda Santa Muerte jacaylka aan macquul ahayn?
ka salaadda Waxay u adeegaan waxkasta oo aad rabto inaad dalbato.
Xaaladdan oo kale waa loogu talagalay jacayl ku hel si wax ku ool ah.
Abuuraha Eebbe Aabbaha wuxuu inagu baraa Qorniinka muqaddaska ah ee uu ugu talo galay inuu ku caawiyo qof kasta oo ugu soo dhowaada isaga waxaanna ugu dhowaan karnaa isaga oo u maraya duco toos ah ama mid kasta oo ka mid ah quduusiinta.
La Santa Muerte Waxay noqoneysaa xulufadeena arrimaha qalbiga iyo dareenka.
Qaacidooyinka loo adeegsado na siiya codsiyada waa wax aan la qarin karin laakiin haddii lagu yaqaan inay awood weyn leeyihiin, mucjisadu waxay u dhacdaa si dhakhso ah oo hufan.
Tukashada dhimashada quduuska ah jacaylka aan macquul aheyn
Oh Dhimashada barakaysan
jacaylku albaabadayda ayuu garaacay, laakiin gacaliye Santa Muerte,
Wuxuu igula dhaqmay si xamaasad leh, waan niyad jabsanahay maxaa yeelay waan jeclahay mana ihi mid keliya.
Dhibaatada tabar darri ayaa i qabata markii aan arko inaan gacmahayga ku jirin xalka dhibaatadayda, waxaan kaa baryayaa murug aad u badan si aad u maqashid tukashadayda, waxaan rajeynayaa inaad dhageysato oo aad dareento sida ay wax u garaacayaan markii gabadhayda cad ay hadlayso. qof aan jeclahay waa jacayl aan macquul aheyn laakiin waxaan rabaa mucjisada ah in iyada dhinaceeda ay dhacdo, in ay suuragal tahay in sababtaas aan kuugu imaado, in aad tahay qof naxariis leh oo mucjiso ah.
Waxaan rabaa in qofkaasi noqdo lammaanahayga oo laguugu abaal mariyo jacaylkiisa oo dhan, waan kuugu mahadcelinayaa waana ku iimaan leh caqiidadaada.
Waxaan kaa baryi doonaa waqtiga loo baahan yahay in codsigayga la fuliyo inta aan sugayo, Waxaan caddayn doonaa daacadnimadayda markaan bixin doono allabarigayga oo aan kuu siiyo Geerida Barakeysan ee aan jeclahay.
Oh, Walaalo Caddaan, Waan kugu kalsoonahay aaminaada aan kugu kalsoonahayna, waxaan rajeynayaa inaad i dhagaysan doonto oo aad fulinayso rajadayda. Sidaas noqo.
Tan duco jacayl Santa Muerte waa mucjiso!
Jacayl oo aan lagu soo celin Waa mid ka mid ah dhibaatooyinka waaweyn ee la silciyay ma ahan oo keliya maanta laakiin tan iyo bilowgii waqtiga.
Marar badan waxaan aaminsanahay nafteena aad u badan in waxyaalaha ku fiican yihiin lammaanaheenna waan la yaabanahay markaan weyno.
Waa xilligaas in salaaddani ay noqoto hubkeenna qarsoon ee inaga caawin kara inaan ku guuleysano dagaalka xoog, run iyo jacayl cimri dheer.
Haa, waa mid aad u xoog badan, gaar ahaan haddii lagu sameeyo iimaan xagga qalbiga laga keenay.
Qaar ka mid ah talooyinka si loo sameeyo jumladdan mid waxtar badan leh gurigeenna uga dhex abuuro meel gaar ah taas oo aan ku leenahay laba Shumacyo casaan iyo caddaan ah, cadaan iyo casaan ayaa isla kacay sedex sawir oo ah qofka aad jeceshahay.
Waxaad sidoo kale qori kartaa magaca qofka ku xigxigayaga iyo jumlad gaagaaban oo gaar ah laakiin waxa ugu muhiimsan had iyo jeer waa inaad rumeysato.
Had iyo jeer rumeyso awoodda ducada ee dhimashada Black Black ee jacaylka aan macquul aheyn.
Salaad awood leh si ay ii soo wacdo